यस्ता छन् ‘भद्रगोल’ बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठका श्रीमान ? सानै उमेरमा विवाह गरेकी रक्षा ग’र्भ वती भएपछि छोडिन् सबै काम (हेरौ केहि तस्विरहरु) – Namaste Host
February 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यस्ता छन् ‘भद्रगोल’ बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठका श्रीमान ? सानै उमेरमा विवाह गरेकी रक्षा ग’र्भ वती भएपछि छोडिन् सबै काम (हेरौ केहि तस्विरहरु)
काठमाडौं । हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठ विवाहित हुन् भन्ने कल्पना सायदै कसैले गरेका होलान् । तर उनी ग’र्भ’ वती भएकी छन् । जसका कारण उनले गर्दै आएका कार्यक्रम पनि छोडेकी छन् । तर टेलिसिरियलमा जिग्रीको जोडीका रुपमा उनी निकै जमेकी छन् । उनको श्रीमान्का बारेमा धेरै कुरा भने बाहिर आएका छैनन् । उनले श्रीमानको नामको ट्याटु पनि बनाएकी छन् ।